भृतक - अर्थहीन, वा modernity को मनोवैज्ञानिक आदर्श छ
भृतक - एक pettiness, बचत, frugality, मोलतोल एक प्रकारको मा विकास जो। Mercantile हामी सामान्य, स्वार्थी व्यक्ति मा सामाग्री लाभ, चिन्तित छ जो व्यक्ति कल।
हरेक मा आधुनिक संसारमा मान्छे लगभग selfless कार्यहरू छैन तिनीहरूले कहिल्यै आफूलाई लागि कुनै पनि फाइदा खोज्न सेवाहरू प्रदान गर्न हामीलाई कदम र तुरुन्तै आफ्नो मूल्य voiced।
भृतक - पहिले मानिसहरू भन्दा महिला मा निहित थियो कि एक गुणस्तर। आज, तपाईं वस्तुतः कुनै पनि मानव चिनारी सक्छन्, र यो अब पहिले जस्तो निन्दा गरिएको छ। यो गुण डाले तिनीहरूले भन्न, "डायपर" संग पहिले नै सुरु हुन्छ। त्यो आमाबाबुले बच्चा भविष्यमा "oblaposhat", वा यसलाई प्रस्ताव सबै सम्भावनाहरू प्रयोग गर्दैन डराउँछन् छ। सामान्य मा, वयस्क को व्यवहार केही हदसम्म त, बुझ्ने छ, कठोर वास्तविकता द्वारा dictated छ।
पूर्णतया बुझ्न क्रममा, हामीलाई अवधारणा को "commercialism" को सार विचार गरौं। अर्थ "स्वार्थी" र "commercialism" को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अवधारणा फ्रान्सेली र इटालियन भाषामा हामीलाई गर्न आउँछ। तर "आत्म-ब्याज" रूसी भाषामा commercialism एक व्याख्या सीमित छैन। यो यस्तो बचत र frugality रूपमा केही थप विशेषताहरु, थपिएको छ। यी गुणहरू विकास को प्रारम्भिक चरण त्यो नोट सकारात्मक छन् र व्यक्तित्व विकास सकारात्मक प्रभाव छ। तर आफ्नो hypertrophied फारम अब राम्रो केहि छ।
सामान्य, भृतक मान्छे मा - स्थिति मा क्यापिटलाइज खोज्ने एक हो। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, लाभ मात्र सामाग्री हुन सक्दैन। र यस्तो मानव व्यवहार को रोगाणु किनभने धेरै परिवार मा, तर पनि वातावरण मा मात्र होइन निर्भर, बाल्यकाल देखा।
वर्तमान र हाम्रो देश को पछिल्लो विश्लेषण, हामीलाई हाम्रो हजुरबा हजुरआमाले र आमाबाबुले विचार को लागि पनि काम गर्नु अघि, पैसा प्राप्त गर्न सकेनौं र निःशुल्क सामाजिक काम सम्झना गरौं। कसैले हामी राम्रो तलब एक आरामदायक ठाँउ फेंक कि गर्नुपर्छ र idealists को बाँध्न सामेल भन्दै छ। तर कहिले काँही यो सिर्फ हाम्रो संसारमा मान को प्रणाली परिवर्तन भएको छ कसरी डराएका हुन्छ। भृतक - यो पनि समाज को फल हो। पनि commercialism एक चिन्ह हो - हामी एक लाभदायक दुलहा लागि देख छ जो एक महिला एक स्वार्थी र गणना छ भनेर भन्न अघि सक्छ, तर अब अनुकूल काम अवस्था खोजी भने।
उदाहरण को लागि, ले, आधुनिक महिला गरौं। त्यो उनको पति राम्रो कमाएका छ, राम्रो तरिकाले विवाह गर्न चाहन्छ, म अर्को शब्दमा, पूर्ण "प्याक" थियो, एक विशाल रहन ठाँउ थियो, वा। आधुनिक मानिसको रूपमा उहाँले एक जीवन साथी पनि गैर-गरिब, सामान्य बौद्धिक हुनेछ फेला पार्न खोज्ने। साथै, यो एक राम्रो गृहिणी र आफ्ना छोराछोरीको एक अद्भुत आमा हुनुपर्छ। पूर्वोक्त आधारित, हामी mercantile दुवै, त्यो छ, सबैलाई आफु को लागि कुनै पनि लाभ देख छ हेर्नुहोस्।
तर Cinderella को कहानी के? साँच्चै अद्भुत भावना दोस्रो लागि गएका छन्, र तेस्रो योजना?
यसलाई गरिएका रूपमा, commercialism सोचाइ यस प्रकारको लागि अवस्था गर्ने सिर्जना प्रत्येक व्यक्ति peculiar हुन सक्छ। खैर, त्यो धनी र सुन्दर जीवनको बारेमा पर्याप्त (या त्यो) फिलिमहरु देखेका थिए, तर त्यसपछि यस्तो फिलिमहरु को अन्तिम यसलाई के हो देखाउन गर्छन मा, यो जीवन समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबैको छनोट गर्छ, र तपाईं एक्लै मूल्य तिर्न पर्छ।
निस्सन्देह, यो भृतक - मानवता र आचरण हामीलाई deprives जो नकारात्मक गुणस्तर छ। तर हामी छनौट र केही धक्का गर्न हामी कुनै एउटा छ। आखिर, छोराछोरीलाई आफूलाई राम्रो र उचित वंचित यो गर्न चाहनुहुन्छ ... तर treasured लाइन हामी, मान्छे, को mercantile रोबोट, हामी सधैं थाहा छैन र जहिले पनि अडिग रहन कसरी थाहा छैन अलग त्यहीं छ। त्यसैले, आफैलाई सोच्नुहोस् आफैलाई लागि निर्णय!
अमूर्त गर्ने क्षमता - abstractly सोच्न आनन्दित क्षमता
व्यक्तित्व को Volitional गुणहरू: विवरण र गठन को सुविधाहरू
रो के हो? मनोविज्ञान र आँसु को शरीर विज्ञान
Zucchini को नाउ मासु र टमाटर संग भरी
अङ्गुर चार्ली: खेती, varietal विशेषताहरु, वर्णन र समीक्षा
बर्ड पंख को संरचना। पंख को प्रकार
हार्ड ड्राइभ त्रुटि 301: कसरी मिलाउने?
उत्कृष्ट खेल कन्सोल र सामानहरू। खेल कन्सोल कसरी छनौट गर्ने?
संगठन को लागत वर्तमान: परिभाषा, विशेषताहरु र गणना को प्रकार
को परिष्कृत natures लागि उच्च-टेक को शैली मा मास्टर सुइट